रुकुम पश्चिम जिल्लाको भेरी नगरपालिकाकी २४ वर्षीया युवतीले वृद्धवृद्धाको मुहारमा खुशी ल्याउने गरी काम गरिन् । सानी भेरी गाउँपालिका–११ रोकाडेराका पदमसिंह रोकाया र पविता रोकायाको घर बनाइदिएर ती युवतीले समाजसेवा गरिन् ।
काठमाडौंमा फरेस्ट्री कलेजमा स्नातक दोस्रो वर्ष अध्ययनरत सिर्जना वलीले ६० वर्षे उमेर काटेका वृद्ध दम्पतीको घर बनाइदिएकी छन् । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर वलीले घर बनाई हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
लकडाउनका बेला गाउँ आएकी सिर्जनाले वृद्ध दम्पतीको दुःख देखेर सहयोग गर्ने सोच बनाइन् । उनी सोही वडाकै वासिन्दा भए पनि उनको घरबाट वृद्ध दम्पतीको गाउँ पैदल २ घण्टामा पुगिन्छ ।
गत असार पहिलो हप्ता वली वृद्धवृद्धाको घरमा गइन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सिर्जना भन्छिन्, ‘म त्यहाँ पुग्दा उकुसमुकुस भएँ । सानो एकतले छाउगोठ जस्तो घर, पवित्राको मानसिक असन्तुलन भएको, अझ भनौं झुपडी जस्तो घरमा ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धा कसरी बसे होलान् भनेर म अच्चममा परें । त्यो अवस्था देखेर मेरो आँखामा आँसु आयो । उनीहरूका समस्या सुनें । भिडियो बनाएँ ।’
भिडियो बनाएर उनी घर आइन् । वृद्ध दम्पतीलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेबारे उनले १ हप्तासम्म सोचिन् । ‘मलाई १ हप्तासम्म निद्रा पनि लागेन । भोक लागेन । किनकि मलाई त्यो दम्पतीलाई कम्तीमा बाँस र कपासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो । त्यसका लागि के गर्ने ? कसरी गर्ने ? आफ्नो परिवारसँग त्यतिधेरै आम्दानीको स्रोत पनि थिएन । मध्यम वर्गीय परिवार भएकाले मैले सोचे अनुसारको सहयोग जुटाउन गाह्रो थियो, जति गाह्रो भए पनि ती वृद दम्पतीको उद्धार गर्नु मेरो लक्ष्य बन्यो । लकडाउन नै जारी भएकाले जे सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, केही गर्ने भनेर म लागें,’ उनी भन्छिन् ।
त्यसपछि उनले त्यो भिडियो यूट्यूबमा अपलोड गर्ने योजना बनाइन् । तर भइदियो के भने उनको वडामा विद्युत् पुगेको छैन । इन्टरनेट ‘टु जी’ मात्रै चल्थ्यो । ‘फोर जी’ इन्टरनेट चलाउनका लागि उनले घरभन्दा माथिको डाँडामा जानुपर्थ्यो ।
यूट्युबमा भिडियो अपलोड गरेपछि उनलाई पहिलो हप्ता ४० हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भयो । ‘शुरूको २ दिनमा १ जनाले ७ हजार रुपैयाँ पठाउनुभयो । त्यो ७ हजारको मैले खाद्यान्न किनेर दिएँ,’ वली भन्छिन्, ‘त्यो देखेर वृद्ध दम्पतीले मलाई धेरै आशिर्वाद दिए । खुशीका आँसु बगाए । मलाई त्यो आशिर्वादले थप प्रेरणा मिल्यो । मैले खाद्यान्न दिएपछि रुकुम पश्चिमकै चौरजहारी मिसन अस्पतालले लुगाफाटो दियो ।’
ती दम्पतीका लागि जसरी पनि घर बनाउने इच्छा भएपछि उनले थप सहयोग जुटाउन थालिन् । ‘यूट्युब भिडियोकै आधारमा ४ लाख ६१ हजार ९६१ रुपैयाँ सहयोग पाइयो । साउन २५ गतेबाट घर बनाउन शुरू गरेर पूरा बनाई हस्तान्तरण गरिसकें,’ उनले भनिन् । गत आइतवार घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा २५ हजार रुपैयाँ सहयोग जुटेको उनले बताइन् ।
ती वृद्धवृद्धाको लागि अझै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यकता रहेको र त्यो पैसा गाउँपालिकाले व्यहोर्ने वचन दिएको उनले बताइन् । घरमा ३ वटा कोठा छन् भने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएको छ ।
उनी भन्छिन्, ‘घर हस्तान्तरण गर्दा मलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । कम्तिमा वृद्ध दम्पतीको ओठमा हाँसो छाएको छ । वृद्ध दम्पतीमा खुशीको सीमा नै छैन ।’
उनले १ वर्षअघि रुकुम पश्चिमकै तिला विश्वकर्माकी छोरी सुशीला विकको पनि उपचार गराइन् । धुलिखेलको अपाङ्ग बाल अस्पतालमा उपचाररत सुशीलाको खुट्टामा क्यान्सर भएको बताउँदै कर्णालीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, दाजु चक्र केसी, बुवा भुपालसिंह वली र शेरबहादुर परियारले अस्पताल गएर सहयोग गर्न फोन गरे ।
अस्पतालमा गएर हेर्दा आमाछोरी मात्रै देखेपछि उनले उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने भयो । उनले भिडियो बनाएर फेसबूकमा शेयर गरिन् । त्यसबाट उनले ४० हजार रुपैयाँ सहयोग जुटाइन् । ती बालिकालाई उनले इन्द्रेणी कार्यक्रममा लगिन्, त्यहाँबाट ९० हजार रुपैयाँ जुटाउन सफल भइन् । अहिले बालिकाको अवस्था सुधारोन्मुख छ ।
विश्वभरका फोटोग्राफरका सिर्जनालाई जनसमक्ष पुर्‍याउन ...